चिनियाँ मूर्ति - बरतन मूर्तिहरु को इतिहास
धेरै वर्षौंदेखि, एक चिनियाँ मूर्ति भन्दा साधारण भित्री स्मृति चिन्ह थियो। यो आंकडा लगभग हरेक घरमा एक प्रमुख स्थान मा, जस्तै छाती मा रूपमा, फ्रेम मा बुना पट्टियां, बरतन हात्ती र परिवार फोटो घेरिएको देख्न सकिन्छ। यो यस्तो कुरा अक्सर चीन भएको कहिल्यै गर्नेहरूको घरमा सजाया छ उल्लेखनीय छ।
बरतन, चीनी माटो, माटो वा Papier-उसिनेको बनेको वृद्ध चिनियाँ मूर्ति, उहाँले दुष्टात्मा घृणा उत्पन्न गर्ने क्षमता छ। धेरै कम से कम, हामी असामान्य मूर्तिहरू को मालिक हामी विश्वस्त छौं। Chinoiserie शैली, जो चिनियाँ मूर्ति गर्न, Rococo एक स्वतन्त्र शाखा छ। यो शैली किनभने तथ्याङ्कले धेरै आकर्षक हेर्न के को, fanciful सजावटी मा निहित र अतिरिक्त को पनि एक निश्चित अनुपात छ।
शब्द "chinoiserie" फ्रान्सेली जरा छ र शाब्दिक अर्थ "चिनियाँ शैली।" यो मा चीन मा सबै र लेट 17 औं सताब्दी मा युरोप मा भयो कि विचारणीय छ। लागि craze चिनियाँ बरतन संस्कृति बढ्दै रुचि र यो देश मा दृश्य कला गर्न वृद्धि दिनुभयो। Chinoiserie सुविधाहरू वास्तुकला, चित्रकला, कला र ती पटक को शिल्प पाउन सकिन्छ।
सबै को पहिलो, चीन पुरातन संस्कृति रुचि भएकाहरूलाई जस्तै यी तथ्याङ्कले। यसलाई गुडिया को इतिहास भन्दा बढी एक सय वर्ष भनेर विश्वास छ।
दुष्टात्मा संग सेनानी
चिनियाँ हामी अन्य दुनिया देखि आउने अदृश्य संस्थाहरू कमै मात्र छन् भन्ने तथ्यलाई विश्वास शताब्दीयौंदेखि छ। आत्माको राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, वा विपरित - वैमनस्यता संग सेट अप हुन। चिनियाँ संस्कृति मा, त्यहाँ सधैं आकर्षण र amulets को एक ठूलो रकम दुष्टात्मा को आक्रमण सामना गर्न मदत गर्न भएको छ।
चिनियाँ मूर्ति - केवल एक शानदार स्मारिका छ। यसको सहज शान्त प्रभाव rocking। सबै उहाँको वरिपरि भइरहेको संग सहमत भने एक तनावमुक्त स्थिति मानिस बसेर, आफ्नो टाउको nods। को दुष्टात्मा हामीलाई सबैतिर चारै ओर कि, राम्रो-natured बोसो सानो डराउने र तुरुन्तै घर पठाए। तपाईं प्राच्य शैलीमा prominently एक शानदार आंकडा मा बस्न गरेको otherworldly आत्माको आफ्नो घर जोगाउन चाहनुहुन्छ भने। उहाँले कार्य सामना गर्नेछ र बस दुष्ट जगतले टाढा Chase छैन, तर पनि परिवारका सदस्यहरूले बीच बुझ्न, शान्ति पाउन मदत।
चीन देखि स्मृति चिन्ह एक अत्यन्तै विविधता छ। प्राचीन समयमा, काल्पनिक विभिन्न सामाग्री को गरे। धनी मान्छे हाथीदांत र portselyanu उठयो, र थिचिएको कागज, माटो, काठ को गरिब बसे गुडिया को घरमा गर्न सक्नुहुन्छ।
परंपरागत सजावटी चित्रकला लेपित काल्पनिक। मूर्ति, सामान्यतया धनी ओढ्ने वस्त्र लगाएका एक ठूलो शरीर को प्राचीन, चित्रण गरिएको छ। उहाँले चीन मा राम्रो भाग्य र सजिलो प्रकृतिको चिन्ह मानिन्छ जो ठूलो कान, छ। दुष्ट शक्तिहरूको साथ मुख्य हतियार लडाकु - आफ्नो अनुहार व्यापक राम्रो-natured मुस्कान गुडिया अप रोशनी।
कसरी यस्तो स्मारिका हेरचाह गर्न? यसलाई आफ्नो आकार, आकार, भौतिक कहां निर्भर गर्दछ। हरेक आंकडा भिजेको हुन सक्छ भनेर नबिर्सनुहोस्। बस समय समयमा धूलो whisk राम्रो।
पाठ क्रोधित भगवान
चिनियाँ मूर्ति कसरी गरे? त्यहाँ धेरै दन्त्यकथा र कथाहरू यसको मूल सम्बन्धित छन्। सबै भन्दा साधारण संस्करण को एक अनुसार, एक पटक दुष्ट सम्राट ज्योति बस्थे। यो अझै पनि उहाँलाई रिसले, गर्व रुचि छैन। विषय उहाँबाट प्रशंसा र प्रोत्साहन सुनिन, तर reproaches र दोष कुनै कमी थियो।
आनन्द को चिनियाँ भगवान - कारण आफूलाई शेन फू हस्तक्षेप गर्न निर्णय गरेको छ एक पटक। मुस्कान र nods - कुनै पाठ खराब सम्राट लागि राम्रो होइन भनेर देखेर उहाँले एउटा मूर्ति यसलाई गरियो।
तब देखि, कुनै कुरा के हुन्छ, सम्राट्लाई सन्तुष्ट र खुसी थियो। आफ्नो व्यापक मुस्कान वास्तविक कार्ड थियो। र उनको टाउको nodding दुनिया गर्न स्वागत मनोवृत्ति प्रतिनिधित्व गर्छ। पोर्सिलेन मूर्तिहरु आज यो पुरानो पौराणिक कथा हामीलाई सम्झाउने काल्पनिक।
तर त्यहाँ अन्य संस्करणहरु छन्। निम्न आधिकारिक मानिन्छ। यो पनि आफ्नो कर्मचारी संग, पुरातन सम्राट सम्बन्धित वा बरु छ। चीन देखि धेरै स्मृति चिन्ह जस्तै, मूर्ति एक वास्तविक प्रोटोटाइप छ।
Orientalists मूर्ति, symbolizing कर्मचारी शासक को वचनहरू रेकर्ड भन्ने विश्वास गर्छन्। सम्राट्लाई dictated जेसुकै होस्, यो कर्मचारी मात्र सम्झौता मा टाउको निहुराउनु सकेन। आफ्नो कार्य भविष्य पुस्ताका लागि बुद्धिमानी वचनहरू कायम थियो। मूर्ति, को पाठ्यक्रम, केहि लेख्न छैन, तर सम्झन्छन् कि, धेरै शताब्दीयौंदेखि पहिले बस नम्र भई आफ्नो काम गरिरहेको जो, कुनै कुरा के गनगन छैन र गनगन।
आज फेरि लोकप्रिय चिनियाँ गुडिया, मूर्तिहरु netsuke र पूर्व देखि यस्तै स्मृति चिन्ह। चीन मा यात्रा, तपाईं बस बिक्री यी प्यारा मूर्तिहरु पूरा छैन। मूर्ति चीन पुरातन संस्कृतिको बारेमा भावुक छ जो कसैको लागि अद्भुत उपहार हुन सक्छ। आफ्नो ऐतिहासिक मातृभूमि ल्याए, यो अपार्टमेन्ट कुनै पनि आधुनिक भित्री मा फिट गर्न सजिलो छ र यात्रा को स्मरण गराउन हुनेछ।
बरतन मूर्तिहरु छनौट, कार्यान्वयन गुणस्तर ध्यान। एक विशेष महत्त्वपूर्ण बिन्दु डाँडाको टाउको छ - सबै विश्वसनीय र टिकाउ हुन छ।
यस्तो तथ्याङ्कले को मूल्य बनाइएको छ जो देखि सामाग्री मा मुख्य निर्भर छ। निस्सन्देह, सबै भन्दा महंगी बरतन र हड्डी बनेको गुडिया छन्।
, आवश्यक छैन चीन जान यस्तो मीठो कुरा प्राप्त गर्न। गुडिया सबै दुनिया भर स्मारिका पसलहरूमा मा बेचिन्छ।
दलदल "Bebiliss": समीक्षा, वर्णन। दलदल-बाल ब्रश BaByliss
Multivarki रेडमन्ड लागि कचौरा। Multivarki लागि कचौरा: चयन गर्न के?
एरोहरूसँग प्यान्ट कसरी फलाम सिक्न - विजेता हुनेछ!
इटालियन महिला: शैली र रोचक तथ्य
छोडपत्र पछि सम्पत्ति को विभाजन कसरी
3 चाल जीवनसाथी - घातक रुकी गल्ती
एक अक्षम3समूह: कस्तो लाभ भर? invalids को सामाजिक सुरक्षा
छिटो खाना क्याफे को श्रृंखला "साइबेरियन प्यानकेकहरू": ठेगाना, मेनू, समीक्षा